Japana : tsy hividy fiara vaovao aho · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Janoary 2008 8:16 GMT
Ny siosion-dresaka an-dalambe no milaza fa mitotongana ny toe-karena Japoney, ary ny fihisatry ny varotra fiarakodia no antony lehibe miteraka izany. Iza no omentsiny ? Ny ankizy, hoy ny sasany, izay tsy mazoto hividy zavatra azo tsapaintanana.
Nanoratra ny momba ny fihenan’ny fividianana fiara ity ny mpamaham-bolongana tamin’ity herinandro ity, ary toa tsy dia gaga loatra amini’ty vaovao ity. Manazava ny iray :
Ankoatra ny fiara maivana, dia toy ny nivenjivenjy tsy hita hoe nahoana izany ny fivarotana fiara tao anatin’ny efa-taona. Toa ny fihenan’ny isan’ny mponina eto Japana, ny fiakaran’ny vidintsolika tampoka ary ny tsy firaikan’ny tanora amin’ny fiara intsony no anton’izany.
Mihaantitra ny mponina eto Japana, mihena ny isan’ny olona manamory fiarakodia, ary mety ho tsy manintona ny tanora ankehitriny intsony ny fiara. Ho an’ny tanora mpiahy tena (freeder vakio ato ny mombamomba io) sy ny mpiasa antselika moa dia tsy maintsy hiteraka fahasahiranana ara-bola ho azy ny fikojakojana fiara ….
Ilaina amin’ny fiainana andavanandro ny fiara ho an’ny olona monina eny ambanivohitra. Fa amin-kitsim-po tanteraka kosa, izay miaina an-tanandehibe, dia tsy handeha any amin’ny manodidina aho hiteny hoe “ ho sahirana aho raha tsy manana iray”. Ho an’ny fianakavianay indray moa, mbola kely ny ankizy, mety aminay mihitsy ny manana fiara saingy …
Raha raisina ohatra amin’ny tranonay, ny fitaterana aloha, mandeha folo minitra mandeha an-tongotra dia tonga amin’ny gara akaiky indrindra, ary telo minitra monja dia tonga eo amin’ny fiantsonan’ny fiara fitaretana. Raha amin’ny fiainana ankapobeny indray no jerena, misy tsenambarotra goavana iray mifanatrika amin’ny gara, ary misy tsenambarotra kelikely kokoa avy eo an-trano raha mandeha an-tongotra atsasakadiny. Misy tranombarotra roa ahitana izay tadiavina haingana ihany koa miala telo minitra avy ao an-trano ihany, ary tsy vitsy ny hopitaly vita dia antongotra manodidina.
Rehefa tsy miasa ihany aho no manamory fiarakodia, mitondra ny fianakaviana hiantsena, na rehefa hitsangatsangana na hiala voly. Manana fahazoan-dalana hitondra fiara ny vadiko, fa miIa fahaizana manokana ilay ao amin'ny fitobian’ny fiara ao, dia tsy manamory izy. 4000 na 5000 maily (1,609km ny maily iray) eo ho eo ny hlavirandalana vitan’ny fiara entinay mandritra ny taona iray, ka raha jerena ny fandaniana lany amin’ny fikojakojana azy dia hita fa mora kokoa ny mandray fiarakaretsaka na manofa rehefa ilaina izany. Satria rehefa eritreretinao ilay izy dia tahaka ny “haitraitra” ihany ny fananana fiara eto an-tanàna.
Sado-mujina, kosa, mbola tia ny fiarany taloha ihany:
Nihena ny isan’ny fiara lafo, tsy noho ny fiara ho tsy maintsy ampiasaina an-tanan-dehibe ihany, fa na dia mitombo noho ny tamin’ny folo taona lasa aza ny zavabitan’ny fiara ankehitriny, dia mbola misosa tsara be noho ny tadiavina aminy ny fiara tonta.
Ny fiara Cresta 12 taona novidiako 160,000 yen [tokony ho 1400 USD] telo taona lasa izay dia toa korotamby raha jerena ivelany, tsy manana olana anefa ny fiara sy ny maoterany, ary mbola manana andromaro isosana tsara koa. Mety hanintona ny manana fiara vaovao, fa ny mividy 300,000 yen [2700 USD] hananana azy 5 taona, na mandoa 2,000,000 yen [18,000 USD] hananana azy 10 taona… ,na dia efa nampidirina anatiny aza ny saram-pametrahana azy dia ampy hananako hevitra mafonja.
Mahafinaritra ihany koa ny mikaroka ao amin’ny Yahoo! Tolobarotra “fiara efa ela nampiasana sy mora indrindra ankoatra ireo tena mahaliana ahy”. Noho izay antony izay dia tsy misy antony hahaliana ahy amin’ny fiara vaovao amidy ankehitriny.
Nefa tantara hafa kosa no mitranga raha misy fiara zafindraony (hybride) antonontonony entin’ny kodiarana aoriana (ohatra, Mark X, Skyline, sns.) na fiara mivoatra be entin’ny maotera diesel mivoaka.
Ireo Fiara tonta milahatra anilan’ny Route 4 any avaratry Mizusawa. (sarin’i IwateBuddy)
Mpankafy fiara tsy liana intsony i ego-brewer:
Izaho ohatra araka ny fahatsiarovana lavitra indrindra takatro dia tena nitia manokana ny fiara lehibe. Fony tanora dia tsy leo mitanisa ny karazam-piara nandalo manoloana ny tena. Rehef anihalehibe indray dia mamaky ny gazety boky misahana ny fiara, ary dia fantadaza tamin’ny fahalalana ny fiara sy ny vidin’ny fiara efa nampiasaina. Mazava loatra fa niavaka aho tamin’ny fiarako.
Na izany aza, vao haingana izay, dia tsy liana fiara tampoka intsony aho. Tsy nividy na dia gazety boky iray momba ny fiara akory aza aho telo taona lasa izay. Tsy ireo mihitsy ny fiara tadiaviko. (tsy milaza ny tenako ho tanora aho.)
Noho ny ezaky ny mpanao fiara hampandroso ny asa sy hamaliana ny hetahetan’ny mpanjifa araka izay azo atao, dia tsapako fa toa mitovy avokoa ny fiara ankehitriny. Tsy hoe tsy mahafapo ny vita, fa noho izay antony izay indrindra dia ampy ahy ny efa ananako ankehitriny ka tsyhitako izay hividianana hafa indray hanoloana azy. Niakatra ny lanja noho ny tebiteby amin'ny fikrakarana sy ny fiarovana hany ka indreo tsy mahita afa-tsy fiara mavesatra sy midadasika ianao. (ilay fiara kely maivamaivana ireny no tiako izao)
Farany, fomba fijery hafa kosa no entin’ iza-koza mandresy lahatra fa zavatra tsara ny fihenan’ny isan’ny fiara lafo:
Be loatra ny fiara eto Japana
Inona indray ny mbola ilana hafa?
Zavatra mandeha ho azy noho izany
ny tsy fankafizan’ny tanora fiara intsony
Aleo atsahatra hatreo
ny fanakanana ny olona hankafy fiara
Ny vahaolana nahomby indrindra amin’ny olan’ny tontolo iainana noho izany dia ny fihenan’ny isan’ny mponina.
Raha ny marina izany dia voajanahary ny salam-pahaterahana mihena sy ny olona mihaantitra.
Tsy tokony hiahiahy amin’ny fihenana ho vitsy indrindra ianao.
Fa izany ary no hamonjy antsika rehetra.
29 Avrily 2009, 10:54